Iva Hutano, Kuchengetedzeka & Nezvakatipoteredza - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Mafambiro ebhizinesi ane mutoro uye kukura kwehupfumi kwakasimba kwave kuri chikamu cheDNA kubvira XY Tower yakawanikwa.
Nhasi kusimudzira uye budiriro yehupfumi ndiyo misimboti yedu inova chikamu chakakosha chechinangwa chedu uye sevhisi uye inogadziriswa kuburikidza nebasa redu rakarongeka.Isu tinotenda kuti chiyero chakakodzera chinogona uye chinofanira kuwanikwa pakati pekusimudzira hupfumi uye zvinangwa zvezvakatipoteredza.Zvinangwa zvezvakatipoteredza uye zvinangwa zvakatemerwa mabhizinesi edu anotariswa neanogara achitonga uye manejimendi chiito pamwe nekuzvimiririra kwemukati uye yechitatu-bato rekuongorora.XY Tower tenda uye kusimudzira kuti vashandi vedu vese vane basa rekuomerera kune zvakatipoteredza zvinangwa, zvinangwa uye manejimendi zvinodiwa.Isu tinozvipira kuve mutungamiri mune ane mutoro HSE manejimendi mumakambani evezera.
XY Tower yakatsaurirwa kune pfungwa yekuti tsaona dzese dzinodzivirika uye isu takazvipira kune zero-tsaona mutemo.Kuzadzisa chisungo ichi uye nekukurudzira tsika yekuenderera mberi nekuvandudzwa kwehutano hwedu hwekuchengetedza hutano uye mabasa enharaunda, zvinotevera zvinodikanwa zvichateverwa:
Kuzvichengeta pachedu tichiziva uye tichitevedzera zvese zvazvino uye zveramangwana Mitemo nemirairo.
Shandisa zvakanyanya kuomesesa zviyero uye maitiro mukambani yedu.
Hutano hwevashandi ndicho chinhu chinonyanya kukosha chekambani.XY Tower iri kuona kuchengetedzeka kunzvimbo dzebasa uye vashandi vese vanofanirwa kunge vari muDziviriro yemidziyo pamusangano, nepo mushandi achifanirwa kunyatsotevera kodhi yekugadzira yekuchengetedza.
Chengetedza Zvakatipoteredza nekuchengeta mwero wakaderera wemarara anogadzirwa kuburikidza nemabasa akasiyana, uye kuderedza kushandiswa kwezvinhu.
Ramba uchicherechedza nzvimbo dzinogona kuitika dzeHSE Management System kuvandudzwa uye gadza matanho anodiwa ekuita kuvandudzwa kwakadaro.